बागलुङमा मतदान उत्साहबर्द्धक, खर्वाङमा ९७ वर्षिय जेष्ठ मतदाताव्दारा मतदान ! – ebaglung.com
बागलुङमा मतदान उत्साहबर्द्धक, खर्वाङमा ९७ वर्षिय जेष्ठ मतदाताव्दारा मतदान !
२०७४ बैशाख ३१, आईतवार ०९:०७	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बागलुङ २०७४ बैशाख ३१ । बागलुङ जिल्लाका १९२ मतदान केन्द्रहरुमा विहानै देखि मतदाताहरुले उत्साहजनकरुपमा मतदान गरिरहेका छन् ।
सदरमुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिका सबै वडाहरुका मतदान केन्द्रहरुमा मतदाताहरुको लामो लाईन लागेको छ भने मतदानकार्य शान्तिपूर्ण तरिकाले अघि बढिरहेको सहकर्मीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका- १ रामरेखाको मतदान केन्द्रमा मतदाताहरु ।
हिँजो राति बम पड्काएर जनमानसमा आतंक सिर्जनागर्ने दुष्प्रयास गरिएपनि त्यसको कुनै प्रभाव परेकोे छैन । मतदाताहरु निर्धक्क मतदान कार्यमा सरीक भैरहेका छन् ।
जिल्लाको पश्चिम ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र बुर्तिवाङ केन्द्रमा पनि शान्तिपूर्वक मतदान भैरहेको छ । गल्कोट नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका र गल्कोट नगरपालिकाका विभिन्न बुथहरुमा मतदाताहरुको विहानै देखी भीड लागेको छ ।
यसैगरी जिल्लाको काठेखोला, तमानखोला, निसीखोला, ताराखोला, बडीगाड गाउपालिकाहरुमा मतदाताहरुले मतदान गरिरहेको अवस्स्था छ । यो समाचार लेख्दा सम्म कुनैपनि मतदान केन्द्रहरु अनपेक्षित कृयाकलापहरु भएको अवस्था छैन ।
खर्वाङबाट सहकर्मी कमल पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार बडीगाड गाउँपालिका-२ अन्तर्गत त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको केन्द्र क वाट ९७ वर्षीय गोविन्दलाल पाध्यले मतदान गरेका छन् । (तस्वीर)
१५ सय ३२ मतदाता रहेको सो केन्द्रमा मतदान गर्नको लागी आईतवार विहानैदेखि उत्साहपुर्ण रmपमा मतदाताहरुको व्यापक सहभागिता रहेको छ । मतदान स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको र शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान कार्य भैरहेको मतदान अधिकृत चुडामणि कँडेलले बताएका छन् ।
सहकर्मी पत्रकार कमल पौडेलका अनुसार बडीगाड गाउपालिकामा दिउसो २ बजेसम्म ५० प्रतिशत मतदान भएको छ । पत्रकारहरु पौडेल र जनार्दन घिमिरेको अनुगमन टोलीले गाउपालिकाको- २ को त्रिभुवन मावि केन्द्र, ५- को भानुमावि केन्द्र, ६- को बुद्ध मावि केन्द्र र ७ को भिङगिठे मावि केन्द्रहरुको अवलोकन पछी दिएको जानकारी अनुसार मतदान अत्यन्तै शान्तिपूर्ण रुपमा सन्चालन भैरहेको छ ।
बुर्तिवाङबाट सहकर्मी छविलाल पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार बुर्तिवाङ स्थित उत्तरगंगा उमावि केन्द्रमा मतदान कार्य सुरु भएको छ । यस केन्द्रमा ९६६ मतदाता रहेकोमा ७०४ जनाले मतदाता परिपच पत्र वितरण भएको छ भने अहिले सम्म १ सय भन्दा बढीले मतदान गरेका छन् ।
उता ढोरपाटन नगरपालिकाको साविक बोवाङ गाविस स्थित ज्ञानोदय मावि केन्द्रमा मतदान गर्न मतदाताहरुको विहानै देखीभीडलागेको सहकर्मी अस्मिता कायतले जानकारी दिएकी छिन् ।
गल्कोट नगरपालिका- ५ हरिचौर मतदान केन्द्रमा मतदाताहरु ।
सहकर्मी बालकृष्ण सुवेदीले गल्कोटबाट दिएको जानकारी अनुसार मतदान केन्द्रहरुमा मतदाताहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । १९६७ मतदाता रहेको गल्कोट- २ नरेठाँटी स्थित महेन्द्र मावि केन्द्रमा मतदाताहरु एकैचोटी केन्द्रमा आएकाले मेलाको रुप लिएको छ । गल्कोट हटिया, दुदिलाभाटी, मल्म, काँडेवास, हरिचौरका बुथहरुमा पनि मतदान शान्तिपूर्ण भैरहेको छ । २०वर्ष पछी स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाएकोमा निकै खुसी देखिएका छन् ।
उता गल्कोट नगरपालिकाको मल्म स्थित भैरब मावि केन्द्रमा पनि मतदान शान्तिपूर्ण रहेको छ । मतदाताहरु उल्लेख्यरुपमा विहानै देखी बुथमा जम्मा भएका छन् ।
गल्कोट मल्म स्थित भैरब मावि केन्द्रमा मतदान गर्न ८८ वर्षिया महिलालाई स्ट्रेचरमा राखेर लगिदै ।
निसीखोला गाउपालिका- ५ निसीको मतदान केन्द्रबाट सहकर्मी कुम्बिर विश्वकर्माले दिएको जानकारी अनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान कार्य जारी रहेको छ ।
जैमिनी नगरपालिकाबाट सहकर्मी विजय रानाले दिएको जानकारी अनुसार नगरपालिकाका विभिन्न मतदान केन्द्रहरुमा मताधिकारको प्रयोग गर्न विहानै देखी मतदाताहरुको भीड लागेको छ । उता जैदी ७ वडाको मतदान केन्द्रमा ८० प्रतिशत मतदाताहरु मतदान केन्द्रमा आईपुगेका छन भने मतदाताहरुमा एक किसिमको रौनकता छाएको छ ।
जैमिनी नगरपालिकको केन्द्र कुस्मी सेरावजारमा मतदान शान्तिपूर्णरुपमा चलिरहेको छ । दिउसो २ बजेसम्ममा अधिकाँश मतदाताहरुले मतदान गरिसकेको सहकर्मीले जानकारी दिएका छन् । सोहि नगरपालिकाको ९ जैदीको मतदान केन्द्रमा दुईजना युवाहरुले खुकुरी प्रदर्शन गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । निजहरुलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएपछी मतदान यथावतरुपमा चलिरहेको बताईएको छ ।
ताराखोला गाउपालिकाबाट सहकर्मी खगेन्द्र विश्वकर्माले दिएको जानकारी अनुसार गाउपालिकाका सबै केन्द्रहरुमा शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान कार्य जारी रहेको छ । मतदाताहरु उत्साहित छन ।
काठेखोला गाउपालिका- ५ विहुँ अमर मावि केन्द्रमा मतदाताहरुले उत्साहित भएर मतदान गरिरहेको सहकर्मी केशव विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् । शान्तिपूर्ण ढंगले मतदान जारी छ ।
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ मा निर्वाचन प्रकृया सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संचालन भैरहेको छ । अहिले सम्म ५० प्रतिशत भन्दा बढि मत खसिसकेको छ ।
निसीखोला गाउपालिका- ३ को प्रभा माविमा रहेको क र ख मतदान केन्द्रमा अहिले विहान ११.३० बजे सम्ममा ४६ प्रतिशत मतदान भएको सहकर्मी लोकेन्द्र निरासीले जानकारी दिएका छन् । क केन्द्रमा ९२४ र ख केन्द्रमा ८७९ मतदाता रहेका छन् ।
सहकर्मी निरासीका अनुसार निसीखोला- ४ को जनमाविमा रहेका दुइ मतदान केन्द्रहरुमा करीब ५० प्रतिशत मतदाताहरुले मताधिकार प्रयोग गरिसकेका छन् । क केन्द्र मा ७५६ र ख केन्द्रमा ७२२ मतदाताहरु रहेका छन् भने अहिले सम्म क्रमश ३६५ र ३२० मतदाताले मतदान गरेका छन् ।
स्मरणीय छ, ४ नगरपालीका र ६ गाउँपालीका रहेको बागलुङमा १ सय ९२ मतदान केन्द्र रहेका छन । जिल्लामा १ लाख ५६ हजार ८ सय २ जना मतदाता रहेको र झण्डै ८० प्रतिशत मतदाताले आफ्नो परिचय पत्र लिएका छन् ।
अघि अघि नेपाली, पछि पछि थकाली….
शिव मावि काँडेवासको मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्था हेर्दा संकटकालको अनुभूति !